Ixabiso - Chengdu Dacheng New Energy Techenology Co. Ltd.
OEM inkonzo elicwangcisiweyo
Igalelo le-AC220v -DC 12v-120v tshaja
AC90V-265V Igalelo-DC 12v-440v itshaja
Uthotho lwebhetri yeLithium
Kwimisebenzi yeshishini, akukho mntu unokumelana nesilingo somgangatho ophezulu kunye namaxabiso asezantsi. Esi sisindululo esiphikisanayo, kodwa singasibeka esi siphakamiso sakudala ukuze abathengi bakwazi ukufumana umgangatho wokwenyani kunye namaxabiso asezantsi. Umgangatho wemveliso ebonwa ngamehlo lixabiso layo lokwenyani.
Ukuphucula izakhono nolawulo. Sidibanisa ixabiso kunye nomgangatho ngokugqibeleleyo. Akukho xabiso liphezulu, kuphela lixabiso eliphezulu kunye nenkonzo engcono.
Umgangatho ngumphefumlo wempumelelo yenkampani yethu kunye nesiqinisekiso esisiseko sokuthenjwa kwabathengi. Ukusukela ukusekwa kwethu, siye ngokungqinelana nolawulo lomgangatho olungqongqo ukulawula imeko yemveliso, ezinje ngezixhobo, izixhobo zemveliso, inkqubo yokuvelisa, ukugqiba imveliso, ukupakisha kunye nokuhambisa imigangatho yemveliso nolawulo. Imigangatho yethu yile: UL, CE, KC, njl.
Inqanaba elingenakuthelekiswa nanto lomgangatho kunye nenkonzoSibonelela ngeenkonzo ezilungiselelwe wena zamaqela kunye nabantu Senza ngcono inkonzo yethu ngokufumana elona xabiso liphantsi.
UChengdu Dacheng New Energy Technology Co Ltd uqokelele iqela leengcali kumacandelo eebhetri zokugcina, ulwazi lwe-elektroniki, ulawulo oluzenzekelayo, isoftware yekhompyuter, kunye nokusebenza kwebhetri ye-lithium yamandla kunye nendibano
Ukwakha i-2, iCandelo 1 Huafu Avenue, Tianfu New Direct, Chengdu 610000, China.